संस्कृत भाषा के हो कसलाई चाहिन्दैन कसलाई चाहिन्छ? | nepaliSamachar.com नेपालीसमाचार
Homeफोटो/भिडियोसंस्कृत भाषा के हो कसलाई चाहिन्दैन कसलाई चाहिन्छ?
२०७७, २८ जेष्ठ बुधबार १६:३३ नेसा संवाददाता फोटो/भिडियो, भिडियो वार्ता 0
संस्कृत भाषा कसलाई चाहिन्दैन कसलाई चाहिन्छ भन्ने विषयमा भाषाविद अमृत योञ्जनद्धारा थप खुलासा । भाषा के हो कसरी मर्छ र मारिन्छ । सरकारले गर्न खोजेको षडयन्त्र चाहि के हो? भिडियो हेर्नुहोस ।